Kushandisa uye kupatsanura kwemarefu emabasa masherufu
Kutanga, kune masherufu anorema anofanirwa kuita basa rakanaka rekupatsanura, kuona kuti zvigadzirwa zvese zvakaiswa muhurongwa, chepiri, zvakafanira kuona kuti chigadzirwa chimwe nechimwe chine chinhambwe pakati pechimwe nechimwe, kuitira kuti pasave ne extrusion pakati zvigadzirwa, kuitira kuti kurasikirwa kwechigadzirwa ...
Kudzivirirwa mirayiridzo yekushandisa inorema basa masherufu
Inorema shefu inoshandisa kudzivirira pamusoro-inorema: inofanirwa kuitwa kuisa zvinhu zvakareruka kumusoro, pasi pesimba rezvinhu zvinorema. Kuwedzeredza kunofanirwa kudzivirirwa mukushandisa masherufu anorema: huremu hwese nhumbi yezvinhu haufanire kupfuudza iwo mutoro wakakura wemashefu akagadzirwa. Rakareba masherufu isu ...
Imba yekuchengetera inoshandisa masherufu ekuchengetedza mabhenefiti
1. Iyo yekuchengetera ndeye-matatu-mativi mamiriro, ayo anogona kushandisa zvizere nzvimbo yekuchengetera nzvimbo, kuvandudza mashandisirwo mwero weiyo imba yekuchengetera uye kuwedzera simba rekuchengetedza. 2.Kunakira kuwana zvinhu, kugona kusarudza zvinhu mukati nekunze, yakatsetseka yeinventory turnover. 3, zvinhu ini ...
Yakanakisa Garaji Shelving - 1
Vazhinji vanhu vane garaji vanoziva netsika yegore negore yekuchenesa chitubu. Apa ndipo paunotora zvese zvinhu zvisingawanzoshandiswa kutenderedza imba izvo zvaive zvisina njodzi zvakakandwa mugaraji pasina dambudziko rakawandisa kana sangano uye woenda kuburikidza nazvo, uchifunga izvo zvaunoda t ...
Yakanakisa Garaji Shelving - 2
URWM184872BK Nhema Simbi Yekuchengetera Rack - Yakanakisa Budget Garage Kuchengetera Kune ichi chigadzirwa, iyo inotarisirwa demographic ndeyechokwadi musika wevatengi. Ichi chigadzirwa chinopa yakaringana huwandu hwekuchengetedza nzvimbo. Kunyangwe isina kusimba sevamwe, tsoka ina nehafu nehafu masherufu etsoka dzichiri zvakakura lar ...
Yakanakisa Garage Shelving - 3
2-Rongedza 24 × 72-inch Wall Shelf - Yakanakisa Kumadziro Akakwenenzverwa Garage Kusherekesa Ichi chigadzirwa chinozopedzisira chatongwa nemakwikwi asina kufanana, asi chinofanira zvakare kunzwisiswa kuti chii. Izvi zvakakosha nekuti uchienzaniswa neyechinyakare masherufu unit, iyo FLEXIMOUNTS madziro gomo haipe g ...
Chengetedzo uye kugamuchirwa kwesherufu mitengo yezvakawanda
ne admin pane 20-08-24
Mutengo wekutengesa wemakesi unonyanya kufunga nezve kuronga nekugadzira dhizaini. Kutenga zvinoenderana nezvakatemerwa uye zviyero zvepurani dhizaini kunogona kuvandudza zvakanyanya kugona kwekutenga uye kupfupisa iyo kutenderera. Saka, ndedzipi matanho edziviriro pasherefu yakawanda? Sei chec ...
Cologne Exhibition Canton Fair Lars Hardware Ratidza Shanghai International Hardware Ratidza